सेतो चकलेट Panettone, अखरोट र ब्लूबेरी। धेरै एक सनक। | ThermoRecines
सेतो चकलेट, अखरोट र ब्लूबेरी प्यानेटोन
म्यासहरू260 मिनेट2 व्यक्ति२2770०XNUMX क्यालोरी क्यालोरी
द्वारा जर्ज मेन्डेज
यो उत्सुकता हो कि केहि तयारीहरू विशेष अवसरहरूसँग कसरी सम्बन्धित छन् क्रिसमसको, पवित्र हप्ता, केही सन्तहरूको भोजीहरू, इत्यादि। हामी वर्षको बाँकी समयका लागि राम्रा चीजहरू हराउँछौं। क्लासिक इटालियन Panettone कि क्रिसमसको समयमा हाम्रो तालिका सजाउँदछ। आज म तपाइँलाई आजीवन प्यानेटोन ल्याउँदिन। म यो प्रस्तुत गर्छु सेतो चकलेट, अखरोट र ब्लूबेरी प्यानेटोन.
तपाईंले कल्पना गर्न छविमा मात्र हेर्नुहोस् सबोर y महोदय। यस्तो तयारी जुन आटा र रोटीको श्रेणीमा पर्दछ र जसको तयारी सबैभन्दा बढी हो सरल। तपाईंले केवल तयारीमा ध्यान दिनुपर्नेछ किनभने योसँग एक विशेष शीत प्रक्रिया छ। म यसलाई तल तल वर्णन गर्दछु भिडियो र मा नुस्खा.
म तपाईं सबैलाई रातो हातले आमन्त्रित गर्दछु र तपाईका पाहुनाहरूलाई इटालियन मूलको यस स्वादिष्ट पदार्थको स्वाद र बनावटको साथ चकित पार्न छोड्नुहोस्। तातो चकलेट o मिठो रक्सी.
के तपाईं नुस्खा हेर्न रहनुहुनेछ?
यसको लागि जानुहोस्!
1 सेतो चकलेट, अखरोट र ब्लूबेरी Panettone रेसिपी भिडियो
2 सेतो चकलेट, अखरोट र ब्लूबेरी प्यानेटोन
सेतो चकलेट, अखरोट र ब्लूबेरी Panettone रेसिपी भिडियो
सधैँ जस्तै, तल तल म तपाईंलाई छोड्छु भिडियो ट्यूटोरियल त्यसोभए तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रोमा यस प्रकारको तयारी गर्न कत्ति सजिलो छ थर्मोमिक्स.
एकचोटि हामीले भिडियो हेरेपछि, हामी नुसारको साथ जारी गर्दछौं।
सेतो चकलेट Panettone, अखरोट र ब्लूबेरी। इटालीको सबै स्वाद एक शराबी र रसदार मिठाईमा जुन यसको स्वाद र बनावटको लागि सबैलाई हर्षित गर्दछ।
भान्छा कोठा: internacional
रेसिपी प्रकार: जनता
क्यालोरिज: 2770 kcal
तयारी समय: 20M
खाना पकाउने समय: 4H
बेकरको खमीरको 1 खाम
टुक्राहरूमा 100 ग्राम सेतो चकलेट
१ g० g अखरोट
१ cand० ग्राम मिठो फल
G० g डिहाइड्रेटेड क्रनबेरीहरू
२ g० ग्राम किसमिस बिना बीज
500 g ताकत आटा
Egg अण्डाको भुई
१ चुटकी नुन
G० g ब्रान्डी
कोठाको तापमानमा १100 g बटर
हामी प्राथमिकताका साथ शुरू गर्दछौं। हामी शीशाको माथि एउटा कचौरा राख्छौं र स्केल सक्रिय गर्दछौं। हामी २ g० ग्राम रोटी आटा, २०० ग्राम तौल र बेकरको खमीरको एक खाम थप्दछौं। हामी सबै मिश्रण गर्छौं जब सम्म हामी एक कम्प्याक्ट आटा पाउदैनौं। कभर र यो and० र minutes० मिनेटको बीचमा उठ्न दिनुहोस्।
हामी भर्ने तयारी गर्छौं। गिलासमा हामी सेतो चकलेट, अखरोट, क्यान्डेड फल, निलोबेरी र किशमिश थप्छौं र हामी १० सेकेन्डको गतिमा प्रोग्राम गरेर काट्छौं। हामी कटोरा र रिजर्भमा हटाउँछौं।
हामी आटा तयार गर्दछौं। हामीले g०० ग्राम ताकतको पीठो, बेकरको खमीर खाम, चिनी, २ अण्डाहरू, योक, दूध, नुन र ब्रन्डीलाई गिलासमा राख्छौं र १० सेकेन्डको लागि वेग at मा मिसाउँछौं।
साउर्डोफ थप्नुहोस् र प्रोग्रामिंग minutes मिनेट स्पाइक गतिमा। त्यसो भए, हामी थर्मोमिक्सलाई फेरि २ मिनेटको लागि स्पाइक गतिमा सक्रिय पार्दछौं र मुखबाट हामी कोठाको तापमानमा अलि अलि गर्दै परिचय दिनेछौं। हामी यो आटा राम्रो संग एकीकृत गरौं। यसलाई १ घण्टा सम्म गिलासमा बढ्न दिनुहोस् (यसले भोल्युम डबल गर्नुपर्नेछ, हामी यसलाई नोजलबाट बाहिर निस्कने छौं)
त्यस समय पछि, हामी ब्लेडमा स्प्याटुलाको साथ आटा कम गर्छौं र स्पाइक गतिमा १ मिनेट घुमाउँदछौं।
हामी आटाको धुवाँले भरिएको हाम्रो टेबुलमा आटा स्थानान्तरण गर्दछौं। हामी आटा तन्काउँछौं ताकि यसले आयत बनाउँछ। हामी यसमा फिलिंग खन्याउँछौं र हामी सबै सामग्री एकीकृत नभएसम्म यसलाई स collect्कलन गर्दछौं र घुमाउँदछौं।
हामी आटा लगभग २ किलोग्राम प्रत्येक मा भाग गर्दछौं। हामी प्रत्येक भागलाई प्यानेटोन मोल्डमा राख्छौं, प्लास्टिकको र्यापले कभर गर्छौं र प्यानेटोन्स सतहमा नपुगुञ्जेल उठ्छौं (करीव hours घण्टा)
हामी सतहलाई कुटेको अण्डाले र रंगीन चाकूको साथ सतहमा क्रस बनाउँछौं।
हामी ओभन १ pre०º मा गर्मीका साथ माथि र तल र fan० र minutes० मिनेटको बीचमा प्रशंसक बिना लिन्छौं। यदि हामी हेर्छौं कि सतह एकदम सुनौलो छ, तब हामी तिनीहरूलाई थोरै चाँदीको पन्नीले छोप्नेछौं ताकि ती हामीलाई जलाउँदैनन्।
एकचोटि हामीले यसलाई ओभनबाट बाहिर निकालेपछि, हामीले प्यानेटोनको फ्लफनेस ग्यारेन्टी दिनको लागि तिनीहरूलाई माथि थमाउन दिनु पर्छ। यसको लागि हामी प्यानेटोन फोर्क वा केही बोचेटा प्रयोग गर्न सक्छौं। हामी तिनीहरूलाई आधारमा पार गर्नेछौं र तिनीहरूलाई दुई लामो कन्टेनरले समर्थन गरेर आराम गर्न दिनेछौं। तपाईं यसलाई भिडियोमा धेरै राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। चिसो भए पछि हामी उनीहरूको आनन्द लिन सक्दछौं।
तिम्रो के बिचार छ? मलाई आशा छ तपाईंले यो धेरै मनपराउनु भयो!
यदि त्यस्तो हो भने, भिडियो माथि औंला छोड्नुहोस् र सदस्यता लिनुहोस् नहर यदि तपाईंसँग पहिल्यै छैन भने। त्यसो भए तपाईले खाना पकाइरहेको सबै चीजसँग अद्यावधिक हुनुहुनेछ।
अर्को हप्ता, भेट्दछौ! यदि तपाईं अधिक हेर्न चाहानुहुन्छ Thermomix साथ रोटी व्यंजनहरु, लिंकमा जुन हामीले भर्खरै राख्यौं तपाईले अरू धेरै भेट्टाउनुहुनेछ।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सामान्य, १ घण्टा र १/२ भन्दा बढी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सेतो चकलेट, अखरोट र ब्लूबेरी प्यानेटोन